Indlela yokufunda indlela yokwenza iimpepha ngokuchanekileyo
Ngendlela yakho kunokuba nobunzima obufaniyo, nokuba ngaba uchwephesha okanye umqali onamandla okusebenzisa izimonyo, kwaye ngenxa yoko kukho ukuvuvukala kwemilomo eluhlaza, ukugubungela amehlo obomvu. Kwinqaku ethi "Indlela yokufunda indlela yokusebenzisa iifom ngokuchanekileyo," siya kukuxelela indlela yokuphepha ezi ngxaki. Iingcebiso zethu zokusebenzisa ngokufanelekileyo imveliso ziya kunceda ukwenza i-makeup yakho ibe yinto emangalisayo, kwaye yenza ube yimfihlelo kwaye uyabonakalisa.
1. Okokuqala khetha isigqibo sokuba ufuna ntoni ukufumana umphumo. Ngayiphi na imeko kufuneka uyenze? Ukuba, ngokomzekelo, uya kuhamba ngemihla kunye nomthandi wakho, ngoko-makeup iya kuba neempawu ezahlukileyo kakhulu, kwaye ihluke kakhulu kwi-makeup ukuba uya kwi-interview enkulu ye-ofisi. Ukuba uqala ukungathandabuzi ukuba ufuna ukubonakala ngathi, unokuncedwa yizinto ezikhethiweyo: oku kuyenzelwa ukuxoxwa ngethuba ngexesha lomsebenzi, ukuzenzela ukuhamba ngosuku, nokwenza izihlandlo ezikhethekileyo (iqela, umtshato), ukwakheka kwansuku zonke kunye nezinye. Ukuba awukwazi ukwenza isigqibo sokuya kwingcali kwi-salon enobuhle.
2. Gxininisa ngokukodwa into ebusweni. Ungazami ukugqamisa iimpawu eziliqela ngexesha elilodwa, kuba oku kunokukhokelela ekubonakaleni ukuba ukhangeleka njengengxolo. Ukuba ufuna ukukhanyisa amehlo akho, kufuneka ukhangele amehlo akho njengamehlo eCleopatra edumile. Ufuna imilomo emnandi, uze ufake umfanekiso kaBrigitte Bardot othandekayo.
3. Zifumanele imibala efanelekileyo kakhulu kuwe. Xa ugqibe ukuba yiyiphi impawu oya kubelana ngayo, ugqibe ekubeni ukhetha imibala oyakuyidinga ukugxininisa ubuhle bakho kule nto. Xa uya kuhlukanisa amehlo akho, gxininisa kwiindlela ozakusebenzisa ngayo ukwenza i-makeup emehlweni akho: i-eyeliner, inken, iso lesithunzi. Amehlo akho amnyama aya kubonakala ephakamileyo kwimilo eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, e-green hues. Ukuba amehlo alubhakabhaka, unokuwasebenzisa ukukhetha: grey, eluhlaza okwesibhakabhaka okanye isityebi, emdaka. Ungasebenzisa iimvavanyo ezizodwa zokwenza iimfuno eziza kukunceda ukhethe imibala eyamkelekileyo eya kwenza ukuba ungenakunyaniseka kwaye untle. Ukuba uthatha isigqibo sokuhlukanisa umlomo ngandlela-thile, ke i-pallet yakho yemibala ye-lipstick iya kuba yi-autumn-brown ukuze ibomvu ebomvu.
4. Lungiselela ukwenza isicelo sokwenza. Emva koko, xa ugqibe ukuba yeyiphi impawu yomntu oye wanquma ukuwabela, wagqiba ekubeni ukhethe iindlela, ngoko kufuneka ulungiselele inkqubo kwaye ekuqaleni kufuneka uhlambe ubuso bakho. Kukhumbeni olucocekileyo, imibala iya kuba ngcono, yonke le nto iya kwenza le nkqubo yokusebenzisa i-makeup ngokukhawuleza kwaye kulula. Emva kokuba ubuso buhlanjululwe kwaye bome, yenza ukuhlalisa ubuso obuncinane, sebenzisa i-lip balm encinane, makulungiselele emlonyeni wakho xa usomile izandla okanye udibanise iinwele zakho. Emva koko kufuneka uqiniseke ngaphambi kokuba inkqubo yokwenza iifom efanelekileyo yokukhanyisa kwigumbi, unokubona ngokucacileyo iinkcukacha kunye nobuso.
5. Ukuqala ukufunda indlela yokwenza iimpepha. Siqala ukugqithisa ubuso besikhumba sakho. Ukwenza oku, sisebenzisa isiseko se powder okanye isilupu. Ukusabalalisa yonke indawo ebusweni bakho, isilungiso samalungiselelo, ukwenzela ukuba ulusu lubukeke lendalo. Kungenzeka ukuba awudingi ukusetyenziswa kwepowder okanye isiseko, unokuncedisa kwaye uthathe isiseko esithile.
6. Iifakela amehlo akho. Ukuba usebenzisa izithunzi, jonga ngokucophelela ukuze icebo lombala litshintshwe ngokulinganayo kwi-yakho yenkulungwane. I-shades elula kunazo zonke kufuneka ifakwe ngqo phantsi kwehlosi. Oku kulandelayo ngumthunzi ophakathi phakathi kwekhulu, kwaye umnyama uhanjiswe ngaphaya kwe-eshshes. Ukusebenzisa ipenseli, kufuneka ipencil yangaphakathi yecilisi, ngelixa ugcina ngokucophelela iipilisi zakho ngaphandle kwesosiko ngeminwe yakho. Xa usebenzise i-eyeliner kwisalathisi sangaphakathi lejwabu leso, kufuneka kwakhona ukuzisa ingaphandle yangaphandle kwekhosidi. Ukuze ufumane eyona ndlela enokuzikhethela yona, kufuneka uzame ngamanqanaba ahlukeneyo.
7. Iingcamango zomlomo wakho. Okokuqala, sebenzisa umlomo ngomlomo womlomo ophantsi. Emva koko kunye nesicatshulwa sakho somnwe, siza kusasaza umbala ngaphantsi komlomo ophantsi, kwaye emva koko ujikeleze phezulu komlomo. Susa umlomo ophuma emlonyeni, ngoko inkqubo iya kuphinda iphindwe ukususela ekuqaleni, ngoko i-lipstick iya kuba bhetele kwimilomo, kwaye iya kuba yinto enhle kwaye ihle. Ukuba usebenzisa iibhululo zokufaka umlomo okanye i-gloss emlonyeni, zonke ezi zinto aziyi kuba nefuthe elifanelekileyo, eziza kugxininisa ubuhle bomlomo. Kodwa indlela yokusebenzisa ngokuphindaphindiweyo imilomo emilonyeni ixesha elide ingalondoloza umbala, kwaye kwithuba lokuqala aliyi kuvumela ukuba ligule.
8. Imilomo emihle, emhlophe. Ukuze wenze umlomo wakho ubonakale ukhanye kwaye udibene, kufuneka usebenzise indlela eyapapashwa ngasentla, kodwa kufuneka usebenzise ezinye iingcebiso. Thatha isicwebezela somlomo ngesimo se-lipstick okanye i-balm, sebenzisa inani elincinci le-gloss emlonyeni womlomo, ngelixa ubeka ingqalelo phambi komlomo. Siya kusebenza kulo mhlaba isixa esincinci se-gloss, siya kwenza ukubonakala kwemilomo, enhle kwaye ekhangayo kwaye kuya kutsala abanye abantu. Sebenzisa iteknoloji echazwe kumhlathi 7 ukuba usasaze i-gloss phezu komlomo. Kwaye ekupheleni kwenkqubo, faka uluhlu oluphezulu lwesigcaziso phakathi komlomo ophantsi.
9. Ukwenza ubuso bakho. Ukuba uya kuphawula kwamehlo akho, faka umlomo wakho emlonyeni wombala obalahle, ukuze ukwazi ukuthatha ingqalelo kwamehlo azungezile emlonyeni wakho. Kwaye xa ufuna ukuhlukanisa umlomo wakho, ungasebenzisa izithunzi zembala elula, okanye uthathe imibala emhlophe okanye emnyama. Siza kufaka inki encinci kwi-eyelashes, kwaye umfanekiso wakho ulungele. Khangela kwisibuko uze uqinisekise ukuba konke kulungile.
Musa ukulibala ngokucophelela, cima ubuso bakho emva kokuhlamba. Musa ukugubha ubuso bakho ngamandla, amabala obomvu angabonakala.
Xa usebenzisa i-makeup kwindawo yamehlo, ungasebenzisa imibala eyahlukileyo yamehlo kunye neepencilisi ezahlukeneyo ze-eyeliner.
I-lip balm ingagxininisa imilomo yakho emihle neyindoda.
Sifunde indlela yokufunda ngokuchanekileyo, sisebenzise imbobo ebusweni bakho ukuze ugxininise ubuhle kunye nobume buso bakho.
I-Microdermabrasion - isikhumba esikhombisayo
Ukunyamekela ngokufanelekileyo kwesikhumba ecaleni kwamehlo
Yintoni engcono: ipencilisi okanye isiseko
Inkcazelo yeSeptemba 1 esikolweni ngo-2016-2017 ngonyaka wezemfundo-umlawuli. Iingcamango zoLwazi lweNsuku yoLwazi kwi-nursergart, ibakala lesi-11, kubafundi bokuqala
Indlela yokucwangcisa uhlahlo lwabiwo mali?
Pizza kunye nenkukhu
Indlela yokuqokelela i-tea ye-Ivan. Iingcebiso zokuvuna, ukumisa, ukuvumba nokuqinisekisa i-Ivan-itiye ekhaya
Ukutshiza amabele enkukhu
Izilwanyana kubantwana: iimpawu, unyango
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-ametrin
Umtshato ovuyayo - usapho olonwabileyo
I-Hypochondriasis: iindlela zabantu zonyango
Impilo yabasetyhini: ukuvutha kwama-ovari
Ubomi bokuqala kwesikhumba nge fibroblasts
Ukutya ekutyebeni komntwana
Impahla yemidlalo kunye nomfazi: ubuhle beVS impilo
Ngeliphi kunye nendlela yokuhlalisa umntwana osanda kuzalwa
Abafana balahlekelwa njani ubuntombi babo?